Wasiirka dhalan yarada iyo ciyaaraha dowlada KGS ibrahim Adan Ali Najah oo ka qeyb galay so dhaweenta madaxweyne lafta garen | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiirka dhalan yarada iyo ciyaaraha dowlada KGS ibrahim Adan Ali Najah oo...
Wasiirka dhalan yarada iyo ciyaaraha dowlada KGS ibrahim Adan Ali Najah oo ka qeyb galay so dhaweenta madaxweyne lafta garen
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Ibrahim Aden Ali Najah ayaa maanta ka qeyb galay soo dhaweynta magaalada Muqdisho loogu sameeyay madaxweynaha Koomfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho,isagoo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ugu maqnaa dalka Turkiga.
Soo dhaweynta madaxweyne Lafta Gareen ayaa waxaa ka qeyb galay madax kala duwan oo ka tirsan dowlada federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka qeyb galay soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa kamid ah wasiirka ciyaaraha Koonfur Galbeed Ibrahim Aden Ali Najah.
Wasiir Najah ayaa howlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho,wuxuuna bogaadiyay safarka shaqo oo todobaadyo qaatay oo madaxweyne Lafta Gareen uu ku tagay dalka Turkiga.
Mudane Najah ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed doorka uu ka qaadanayo sidii dalka uu adi lahaa doorasho,iyadoo magaalada Muqdisho la filaayo in dhawaan uu ka dhaco shirka u dhexeeya dowlada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Wasiirka ciyaaraha Koonfur Galbeed mudane Najah ayaa cod dheer ku sheegay in bulshada Koonfur Galbeed ay had iyo jeer diyaar u yihiin dhismaha dowladnimada Soomaaliya,isla markaana aysan caqabad ku noqon doonin marnaba geedi socodka dadka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Najah oo hada ka tirsan golaha wasiirada madaxweyne Lafta Gareen ayaa kamid ah mas’uuliyiinta ugu firfricoon golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed,iyadoo lagu xasuusto doorka ay wasaaradiisu ka qaadatay guulihii taariikhiga ahaa ciyaartooyda Koonfur Galbeed ka sameeyeen tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Ibrahim Aden Ali Najah ayaa soo noqday laba mar oo hore gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose oo mudo uu majaraha u hayay,waxaana mudadaasi uu ka sameeyay mashaariic horumarineed oo maanta ay ka faa’ideysanayaan bulshada Shabeelada Hoose.
Maamulkii Najah ayaa si gaar ah loogu xasuusan doonaa dedaalkii maamulkiisa uu ku bixiyay mideynta iyo is dhex galka dhalinyarada gobolka,taas oo horseeday in loo magacaabo wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha,si uu u mideeyo guud ahaan dhalinyarada Koonfur Galbeed
Maqaal horeMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo soo gaaray Magaalada Muqdisho
Maqaal XigaDad badan oo Cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Galmudug